Porofon'ny fitsaboana hafa mahaleotena amin'ny alalan'ny vavolombelona izay manainga ny mpanafika Martin Vrijland (Naomi Hoogeweij): Martin Vrijland
Porofo maro hafa amin'ny haino aman-jery mifehy fitondrana amin'ny alalan'ny vavolombelona izay manaisotra ny mpanafika Martin Vrijland (Naomi Hoogeweij)
Filed in NEWS ANALYZES	by Martin Vrijland	amin'ny 5 May 2019	• 42 Comments
Tao amin'ny lahatsoratra maromaro no nanazavako ny fomba nandaminana ilay fanalam-baraka sy fanalam-baraka hita an-tserasera tamin'ny alàlan'ny adiresin'ny mpiasam-panjakana Jeroen Hoogeweij. Afaka nanao izany izy tamin'ny tsimatimanota, satria tsy nisy na inona na inona natao tamin'ny fanambarana nataoko. Izy ireo dia eo amin'ny fantsom-paharazana amin'izao fotoana izao fa tsy mpahay lalàna izay te-hiasa amin'izany. Ny ezaky ny fanesorana ny rohy avy amin'ny lisitry ny fikarohan'i Google dia mitarika ho amin'ny fanilihana na dia eo aza ny lalàna iraisam-pirenenan'ny GDP izay mihatra amin'ny tontolon'i Eoropa manontolo, afa-tsy ireo izay tsy misy dikany.
Mazava fa ny olona rehetra izay tsy anisan'ny sehatry ny haino aman-jery mifehy ny haino aman-jery dia voatery nanafika sy nisitrika. Mazava ho azy, ny fanafihana an-kerisetra dia mitranga amin'ny fampahalalam-baovao mahazatra hafa mahazatra, saingy avy eo dia natao ny mikendry ny hijery ireo lohahevitra tiana. Tsy avy amin'ny sokajy goavam-be izay tsy nampidirina ilay mpandika anarana, na ny anarana sy ny sekolin'ny zanako vavy aza.
Ny loharanon'ity fanalam-baraka ity sy ny fanalam-baraka dia nahafantatra fa hanangana ny maha-izy azy vaovao izy, satria tsy ela taorian'io i Aleister Crowley mpanohana sy ny Pretra RTD Jeroen Hoogeweij no niova fo ho vehivavy iray, ary ankehitriny dia mamakivaky ny fiainana izy tahaka an'i Naomi Hoogeweij. Mandritra izany fotoana izany, ity toetra ity dia mavitrika tokoa ao amin'ny aterineto ary mahazo toerana tahaka ny mpanoratra ao amin'ny tranokala mafàna fo toy ny jalta.nl. Naomy dia tena mavitrika amin'ny fampiroboroboana ny transgenderism, izay tsy safidy hafahafa ho an'ny pretra RTD, satria ny fampianarana Rosiana dia mihodinkodina manodidina ny fandalinana ny fandaharanasa fanovàna ny lahy sy vavy; mba hanamafisana ny fiderana an'i Baphomet hermaphrodite (marika ho an'i Losifera). Matetika izy io no misafotofoto amin'ny satanisma sy ny fanomezam-boninahitra an'i Satana, fa ny modelin'i Satana / Satana dia ny dualisma izay fitaovana hanatrarana ny tanjona farany. Eo am-pivoahana, i Lucifer dia mivavaka; Fa izany no zava-miafina goavana. Izany no mahatonga azy ireo antsoina hoe fiaraha-miafina miafina, satria ny Crowley toy izany dia miankina amin'ny tsiambaratelony ary afaka mivoatra ao anatin'ny fikambanana amin'ny alàlan'ny fanombohana sy laharana. Ny ambony kokoa ny laharana, ny hahalalanao ny tsiambaratelo.
Fotoana vitsy lasa izay (novambra 2017) no nanatona ahy tamin'ny alalan'ny transsexual iray izay nilaza fa mahafantatra an'i Jeroen Hoogeweij ho an'i Naomi Hoogeweij. Fantany izy avy amin'ny vondrona mpanohana ny 'vehivavy vehivavy tratran'ny Humanitas' any Rotterdam. Tamin'izany fomba izany dia nahazo fahitana aho teo am-panaovana ity paikan'ny fahefana ity izay niasa nandritra ny taona maro hanonganana an'i Martin Vrijland. Vakio eto ambany:
Subject: Naomi / Jeroen Hoogeweij
Ity manaraka ity dia soratako ho anao manokana.
Izaho dia transegender Schiedam, lehilahy iray izay mahatsapa toy ny vehivavy ary miankina amin'ny fikarohana (ADN).
Tampoka teo dia nanjary fantatry ny mpizara Naomi / Jeroen Hoogweij izay nofaritanao. Rehefa niverina aho dia tsy nahafinaritra ahy izany.
Izaho dia mpanodina 63 taona, izay, nanomboka ny nanambadiany ny 39 nandritra ny taona maro, dia nanomboka niaiky ny toetrako marina tamin'ity taona ity. Ny vadiko malalako dia manohana tanteraka izany ary miara-mijanona fotsiny izahay.
Tsy misy ifandraisako amin'ny aloka rehetra manodidina an'i Aleister Crowley sy ireo mpanohana azy. Tsy manana na inona na inona aho amin'ny finoana na amin'ny devoly. Tsapako anefa fa ny torolàlana Templar dia mifandraika amin'ny karazan-javatra maizina.
Ho an'ity Naomi ity dia nihaona taminy aho tamin'ny vondrona mpanohana ny 'vehivavy mpanara-maso' ny Humanitas tao Rotterdam ary toa nandeha tsara ny voalohany. Rehefa tonga saina izy ireo fa nifampiresaka nifanaovanay izahay, dia nanomboka nifankatia ihany izahay. Izaho (sy ny vadiko teny an-dalana) dia nahafantatra an'i Naomi tamin'ny fomba mahagaga ary nahatsikaritra fa somary hafahafa amin'ny fitondran-tena izy, saingy noraisiko ho toy izany ihany koa, satria nampianatra ahy betsaka momba ny fahaleovan-tena sy ny fahalalany momba ny lohahevitra sasany. Rehefa nandeha ny fotoana, na izany aza, dia nanjary tsy nampoizina mihintsy izy, ary tamin'ny farany, raha nandany ny hevitro tamin'ny alàlan'ny Facebook aho, dia nokapohiny tanteraka aho raha tsy nanaiky izy. Tamin'ny fotoana iray tena nampalahelo ahy sy namarana ny fifandraisana. Nanimba ahy izy ary nanome tsiny ahy noho izany.
Raha tsiahivina dia takatro fa nitsidika azy aho satria ny fiainana amin'ny maha-transsexikanina dia tsy mora foana ary ny fametrahana ny olona mpandika lalàna. Raha ny tena izy anefa, dia fanahy tsy nifandray tanteraka izahay. Naomi dia lasa vehivavy iray mampidi-doza sy mandiso fanantenana izay tsy mahalala tsara ny manafina ny teti-piarahamoniny amin'ny ankapobeny (mazava ho azy fa tsy ny lehilahy rehetra no toy izany). Ny vokatr'izany dia nofaohin'ny andaniny sy ny zava-bitany aho ary nanesoeso ahy ny Transsupport tany Rotterdam. Fantatro avy amin'ny olon-droa hafa mpandova fa nanao vivery ny ainy koa izy ary tsy mifandray intsony. Toa ahy fa loza aterak'io vondrona vulnerable io.
Nandre aho avy amin'ny mpifanolo-bodirindrina tao an-tranoko ihany koa fa misy antonta polisy momba azy. Nisy tsaho momba pedofilia. Tsy fantatro hoe marina izany. Na ahoana na ahoana, mino aho fa amin'ny ampahany amin'ny korontana izay i Naomi mitantana ny aterineto dia misy zavatra tsy mety aminy.
Ny zava-bitako tamin'ireto fihaonana rehetra ireto dia fihetsika tsy tapaka sy mihetsiketsika momba ny firaisana ara-nofo sy ny endrika faratampony izay navotsotra.
Rehefa ampidiriko daholo ny zava-drehetra, dia mifarana amin'ny olona manana toetra matanjaka ara-psikophy aho, olona iray tsy maintsy andrasanao.
Noho izany dia takatro fa nanana olana maro tamin'io olona io ianao. Tsara vintana amin'ny asanao!
Ankehitriny dia efa niandry ela be aho hamoahana ireo mailaka ireo, satria toa sahiran-tahotra an'i Naomi Hoogeweij ilay olona. Mbola nisy fampahalalana maromaro ihany anefa, nampiseho fa tsy olona i Naomi. Avelao aho hamaly ny valinteniko amin'ity e-mail ity. Eto ambany no hametrahako ny valiny azoko. Tamin'izany valiny izany dia hita fa nampiofana ny tafika Israeliana i Naomi.
Misaotra anao noho ny fisokafanao. Ny fahatsapana izay matetika dia ny fananako ny olona amin'ny fanentanana homosexuality na amin'ny olona mpandika lalàna. Io fahatsapana io dia noforonin'io Jeroen io indrindra (araka ny niantsoana azy hoe Hoogeweij). Tsy manana na inona na inona amin'ny olona aho ary azoko sary an-tsaina fa diso hevitra momba ny lahy izy ireo. Raha ny tena marina: tranonkala malaza iray manaraka ahy sy mamerina ny lahatsoratra avy amiko no tarihin'ny mpandova iray.
Ny fahasamihafana misy eo aminao sy i Naomi dia ny hoe izy angamba tsy nanao ny safidiny ho an'ny transsectera noho ny fahatsapany vehivavy tamin'ny vatana. Amin'ny tranga azy, dia azo inoana fa safidy mifototra amin'ny finoana Luciferian / Crowley. Izany ihany koa dia safidy ihany koa fa afaka misafidy ny tsirairay, saingy amin'ity tranga iray ity dia misy karazam-pihetseham-po ao ambadik'izany.
Amin'ny lafiny manokana, ny vidin'ny fanalam-baraka sy ny fanendrikendrehan'ireo lahatsoratra avy amin'ny tànan'i Jeroen dia somary kely ihany. Ohatra, ny antony mahatonga ahy tsy hahita ny zanako vavy intsony. Tena mampalahelo izany. Izany koa no antony nandao ny tranoko sy ny foko ary tsy hahita asa mahazatra intsony eo amin'ny fiarahamonina.
Raha manaiky ianao, te hanontany anao aho raha toa ka azoko atao ny mamoaka ny fijoroanao ho vavolombelona amin'ny fomba tsy fantatra sy / na mampiasa izany amin'ny raharaha fitsarana izay antenaiko ho azoko atao.
Raha te hizara zavatra hafa momba izany ianao, dia afaka ihany koa.
Dia eto ny valin'ny valinteniko. Marina aloha fa efa nihevitra ny tsy hamoaka izany aho, satria te hiaro ilay olona voavolavola aho, fa raha miteraka fanafihana amin'ny mpanoratra ity boky ity, dia mazava tsara avy eo ny andaniny sy ny ankilany. Ankoatra izany, toa zava-dehibe ho ahy izany fa tokony hivoaka indray mandeha indray mandeha, satria tsy misy fiarovana na fanarenana ho an'ireo fanafihana amin'ny adiresiko ary mba hampisehoana ny fomba ijeren'ny tsipika.
Ny Andron'i Martin,
Toa mampidi-doza ahy izany, satria afaka milaza avy hatrany avy amin'ny tantara hoe iza io ho an'ny 'loharano tsy fantatra anarana'. Amin'izay fotoana izay dia tsy hiadan-tsaina aho. Manana hevitra momba ny fomba handresena an'izany ve ianao?
Te hizara bebe kokoa momba an'i Naomi? Fantatrao ve fa nanompo tao amin'ny tafika Isiraeliana izy tamin'ny fotoanan'ny Intifada voalohany ary mety nandray anjara tamin'ny famongorana ny fitaovam-piadiana izy? Niezaka ny hahatakatra ny fihetsik'ireo miaramila Israeliana izy.
Fantatrao ve fa miaina miaraka amin'ny lehilahy iray izay nanao ny asany ho toy ny didy ambaran'ny tsena iraisam-pirenena izy. Azony hazavaina amiko ny fomba hanapahana ny tendany. Ao anatin'izany dia tahaka ny lehilahy tsy misaina, misara-panambadiana (miaraka amin'ny zanakavavy), izay inoako fa manararaotra ara-bola an'i Naomi (tsy manana fidiram-bola firy izy). Raha efa nanao ny asany izy dia mety handefa azy. Mino aho fa tsy afaka manohana ny fifandraisany ela izy.
Nilaza i Naomi fa nitranga io lehilahy io raha nijoro ho mpandika teny izy. Mety hampiasa herisetra izy. Efa nandre izany zavatra izany avy tamin'ny vavany aho.
Raha manana fanontaniana ianao dia aza misalasala manontany azy ireo.
Mariho fa azoko atao ny mametraka ity fifanakalozam-peo mailaka eto ity raha toa ka manana porofo mavesa-danja amin'io izany ao amin'ny mailakako aho, raha tsy izany dia azo antsoina avy hatrany ny fanasoketana ny fanandevozana sy ny fanendrikendrehana ary tsy mety hiditra am-ponja aho.
Namadika 45 i Naomi tamin'ny volana Septambra, noho izany dia avy amin'ny 1972. Ny intifada voalohany dia niasa tamin'ny 1987 tamin'ny 1993 ary avy eo i Jeroen dia tokony ho nanompo tany amin'ny faran'io fotoana io. Mety ho nanana fiofanana ara-miaramila be dia be tao izy ary matetika no nanao fampiasana teknikam-panoherana izay ho nianarany. Ny tafika holandey dia noraisina ho 'tafika sôkôla' tao. (Tiany ny hanaitra ny fanambarana toy izany).
Jiosy? Mety amin'ny heviny: Jiosy araka ny azy, satria Jiosy ny reniny ary araka ny fomban'ny Jiosy dia voafaritra eo amin'ny tsipika vavy raha izany no izy. Tany Isiraely dia mety hanana fampiofanana Yeshiva izy, izay nianarany fa handondona ny iray hafa dia mety ho 'ny tsara indrindra' avy aminao.
Hitako izany ao amin'ny Wikipedia:Hesder jesjiva
Ao Israely dia misy ihany koa ny jesjiva mahasosotra, izay misy ny Fandalinana Thorah miara-miasa amin'ny tolotra miaramila. Amin'izany dia mitaky enina ambin'ny folo volana raha tokony ho ny telo taona mahazatra. Amin'ny faritra be mpiondana, ny miaramila miaramila dia matetika no mihetsika ary manaiky ny baiko avy amin'ny rabiny amin'ny resaka feon'ny fieritreretana. Imbetsaka izy ireo dia nandà tsy hamoaka didy avy amin'ny baikon'ny tafika amin'ny fandroahana ponenana tsy ara-dalàna.
Hesesh Yeshivas dia mifandray amin'ny orthodox jewish drafitra io fivavahana Zionisma fa tsy mifanohitra amin'ny fivoahan'ny Jiosy ortodoksa fialam-boly Jodaisma tsara ho azy Zionism ary amin'ny fanitarana azy handray anjara amin'ny Tafika Israeliana fanjakana.'
Fantatro tatỳ aoriana fa niasa ho an'ny AIVD tao amin'ny tranokalanao izy. Tsy nilaza zavatra momba izany tamiko izy. Na izany aza, tsy ho afaka hahazo ny antontan-taratasy toy izany ianao. Azo atao amin'ny "asa" tsara amin'ny fanompoana ao amin'ny tafika israeliana sy ny fanabeazana mendrika - satria izy milaza fa manana izany izy; Ary rehefa mieritreritra ny ao anatiny aho dia mahita literatiora maro be - azoko atao ve ny mankany amin'ny AIVD? Na nanampy ve izy nahita "tariby" tao amin'ny fiainam-pianakaviana, izay nahitan'izy ireo 'olo-malaza' toa an'i Oscar Hammerstein sy Pim Fortuyn? Nizara ny fandriana niaraka tamin'i Fortuyn koa izy.
Avy amin'ny tantara teo aloha, fantatro fa matetika no nampiahiahy ny rainy ary nodinihany hoe 'sarotra'. Nolazaina fa napetraky ny raim-pianakaviana tao amin'ny sekoly ambaratonga iray tao Angletera izy. Izany ve no nahatonga azy ho lasa tsy misy dikany, manjakazaka ary manimba ny fiainany? Ny fanebahana amin'ny zatovo dia mety, nieritreritra, indraindray dia mitarika olona iray izay te-haka ny fiteniny. Na izany na tsy izany dia tsy psychologista aho.
Satria mila mitandrina foana aho fa tsy voatery hampihetsi-po amin'ny fampahalalana tsy marina aho, efa ela no nisalasala hamoaka izany rehetra izany. Mandritra izany fotoana izany dia heveriko fa mahaliana loatra ny fahalianan'ny mpanao gazety. Raha fampahalalana diso, dia mety hampiseho kokoa ny fomba fiasan'ny olona izany. Dia mametraka ny fihavanana aho. Voalohany ny valinteniko ary avy eo ny valiny.
Info tena ilaina.
Mahafantatra bebe kokoa momba ny fampiofanana sy ny asa aman-draharaham-panjakana, firaketana heloka bevava ary ny toy izany ve ianao?
Naomy dia mavitrika tokoa ao amin'ny tranok'i Swapichou.
Misy ihany koa olona mavitrika izay manoratra eo ambanin'ny pseudonym Ziva. Fantatro io vehivavy io fa manompo ao amin'ny tafika Israeliana ihany koa izy. Noho izany dia mihamazava kokoa ny tsipika.
Ary ity manaraka ity:
Momba ny fanabeazana nataony dia nilaza izy fa manana mari-pahaizana licence momba ny psychologie izy ary ny mari-pahaizana maîtrise amin'ny literatiora Holandey ary ny iray amin'ny fitantanana raharaham-barotra. Tena toa ahy izany. Na izany aza dia be dia be ao aminy. Heveriko fa ny heriny dia mitoetra ao amin'ny faharesen-dahatry ny tenany manokana. Manontany tena aho raha marina izany. Mety ho ratsy tahaka ny olon-kafa izay tsikaritro izy ary mamerimberina ny tenany. Ankoatra izany, ny sehatra dia tena iray amin'ny lafiny iray ary nianatra. Hitanao fa nampiseho fahalalana mitovy amin'ny olona nandritra ny taona maro izy.
Fantatro fa hatramin'izao fotoana izao dia karazana lehiben'ny sampana ao amin'ny Banky RABO ao Utrecht izy ary izy irery no mitantana tranonkala sasantsasany (ny sasany amin'izy ireo koa dia nanome vola). Nokarohiko izany ary niahiahy aho fa maro amin'izy ireo - indray - sary vetaveta. Ao amin'ny tranonkala hafa izay niasa izy, toa an'i Swapichou, dia nanatanteraka ny fanitsiana azy hatrany na tsia izany, mba handrodana izany sy ny zavatra hafa toy izany.
Ho mpitsangatsangana ara-politika ve izy ka tokony "hanitsy" na hanafika izay toa tsikera momba an'i Isiraely? Olona tokony hanakivy na hampitahotra ny olona mitsikera an'i Israely. Tsikaritro ihany koa ny nanazavany ny tenany ho Jiosy. Nanana fahatsapana mahery vaika aho fa mahatsapa ho isan'ny vondrona voafidy. Ho ahy manokana dia tsy misy firenena voafidy, ka dia tezitra kely aho.
Fantatro fa raketin'ny heloka bevava avy amin'ny mpifanolobodirindrina iray, fa ny fototra ijoroany izany, tsy fantatro. Ao anatin'izany, tsy mpifanila fahatsapan-javatra izany mpifanolo-bodirindrina izany. Fantatro avy amin'ny manodidina fa nanafintohina ny olona i Naomi tamin'ny fiatrehany ny fahombiazany. Ohatra, nantsoiny ampahibemaso ahy (ao amin'ny antsoina hoe Pink Café) ny "mpanjifa madinidinika" toy ny hoe mahazatra izany. Angamba izy marina, kanefa dia tsy miteny toy izany ianao? Ity ihany koa ny hevitra te-hametraka ny tenanao eo ambonin'ny olon-kafa. Fantatro amin'ny mpifanolo-bodirindrina iray hafa fa nitatitra tamin'ny polisy i Naomi noho ny 'fanenjehana'.
Misy fomba sy fitsipika eo amin'ny olona ary ny fiheverany fa ny fitsipika tsy mampihatra azy dia toetra iray hafa mampiavaka ny psychopath. Ary raha fantatrao manokana izy, matetika izy dia manao vazivazy izay toa heveriny fa ny olona dia toy ny 'zavatra', toy ny hoe 'Eny, tsy hijanona amin'ny andalana aho, fa ho an'ny olona adala. Tena tokony hanampy azy avy hatrany aho. Ireo dia vazivazy fotsiny, saingy raha renao izany dia nilaza zavatra be dia be ry zareo. Ary dia toy izany hatrany.
Oh eny, ny fanafihana amin'ny fo. Na izany no hosoka. Tsy mieritreritra izany avy hatrany aho, satria milaza izy fa mampiasa karazana fanafody efatra ho an'ny olana. Ny antony hamelezana ny fo dia lazaina fa mifandray amin'ny fampiasana zava-mahadomelina. Mety ho nanafintohina ny fony izy raha vao nanao firaisana tamin'ny olona iray ary niaraka taminy ny zanany lahy ary niady hevitra taminy. Raha tao amin'ny toeram-pitsaboana izy, dia nisy zavatra izay mety nandositra fitsaboana goavana. Avy eo dia nandeha an-tongotra tamin'ny lamasinina izy tamin'ny alina ary mety nanana hevitra hamono tena. Izany no antony niantsoany ny reniny tamin'ny misasak'alina, dia mety niteny izy hoe: "Tsy maintsy izao, alina izao ary eo am-pandriana aho." Azonao sary an-tsaina ve izany fianakaviana izany?
Nefa tamin'ny farany, i Naomi dia nopotehina ary ankehitriny dia lasa izany fo izany indray.
Martin, tsy maintsy mijanona aho androany. Raha misy tonga ao an-tsaina dia alefa mailaka aminao aho.
Jeroen Hoogeweij dia niara-nipetraka tamin'i Micha Kat teny an-jorony. Tamin'ireny andro voalohandohany ireny, fony mbola tsy nahatsikaritra ny fomba fitantanana ny fampahalalam-baovao mahazatra any Holandy aho, dia nanomboka nanoratra ny lahatsoratra manokana aho avy amin'ny hafanam-po tsotra (na kely), ny fanafihana mafy nataon'i Jeroen Hoogeweij izay tsy dia tsy te hiantso ireo tranonkala fanta-daza fanta-daza izay efa nalehako ary tsy nisalasala nanatona ny karazan'olona rehetra avy any amin'ny tranoko manokana mba handraisako vaovao. Tsy nihevitra i Micha Kat fa drafitra tsara izany amin'ny fotoana handehanako mankany amin'ny mpifanolobodirindrina aminy. Azoko tsara izao ny antony. Ny paona ao amin'ny lalao mpanohitra, izay ara-bakiteny, dia niara-nipetraka ara-bakiteny teo an-jorony. Na dia nanafika an'i Jeroen aza i Micha Kat, dia tsy fototra mihitsy izany ary ny tanjona fototra dia ny handrakotra ny fanafihana henjana mafy amin'ny oloko ary koa ny hanomezana ny fahatsapana fa ireo mpifanolo-bodirindrina ireo dia tsy avy amin'ny fiarovana toy izany.
satria ny fanambarako avy amin'ny 2014 Fantatray ihany koa fa i Micha Kat (mpiserasera teo aloha ary ankehitriny revolisionera an-tserasera) dia afaka mifandray amin'ny tambajotran'ny mpampiasa vola izay tsy manana laza maloto. Nahita ny rohy tamin'i Jack Abramoff sy Robert Rubenstein izahay. Mifandray i Micha Kat miaraka amin'ny toeram-pijerem-paritra iray antsoina hoe Council for National Policy (CNP). Ka raha ny marina dia mifamatotra izany. Ireo vohikala fampahalalam-baovao lehibe any Holandy dia nitazona an-tsarimihetsika kely avy amin'i Micha Kat hatramin'ny fanambarako, saingy mbola tsy nanavakavaka mihitsy hatramin'ny taona maro nanohana azy, izay nahazo ny loka Kat a Frontier. Frontier no anarany lehibe izay nikarakara kongresy nandritra ny taona maro izay nahasarika mpitsidika an'arivony maro; izay mbola mitantana bokim-bokatra any Jordaan any Amsterdam ary namoaka gazety malaza nandritra ny taona maro. Karazana pivotina any amin'ny firenena media fampahalalam-baovao hafa.
Ho an'ny ankamaroan'ny olona, ​​ny sary nataoko dia nanoratra fa tsy mila tetika ara-tafika fotsiny ny fampitam-baovao mahazatra, satria lasa andry eo amin'ny fiainana izany. Raha toa ianao ka nahazo fampahalalana manokana avy amin'ny loharano sasany nandritra ny taona maro ary misy olona iray tampoka milaza aminao fa loharanom-panaraha-maso izy ireo, dia manozongozona ny andrin-olona azo itokisana ary avy eo dia ny vokatra ara-psikolojika antsoina hoe 'fampihetseham-pahamarinana.'
loharano: Cafe Weltschmerz (YouTube)
Tao amin'ny 2018 Jeroen / Naomi dia tonga tao amin'ny vaovao indray momba ny hetsika iray izay hisamborana azy noho ny tsy fisian'ny vola. Naharay mailaka avy amin'ny olona avy amin'ny fifanakalozana mailaka voalaza etsy ambony ihany koa aho. Araka ny voalazan'ilay mpanoratra, i Naomi dia hiaro an'i Oscar Hammerstein (vahiny tonga soa avy amin'ny Café Weltschmerz) satria mety hanana fifandraisana ara-piraisana aminy izy. Raha heverina fa marina ny loharanom-baovao, dia miharihary fa misy tamba-jotra feno anarana fanta-daza.
Ho an'ny fampahalalam-baovao ity dia mitatitra ity gazety ity:
Efa fantatrao ve izany? Amin'ity tolakandro ity dia hanana trano tsy misy vidiny aho. Ampiasao fotsiny ny google ary eny ... Raha misy zavatra tsy mety aminy dia izany dia mitranga foana amin'ny halatra.
Fantatrao angamba Hammerstein. Ny mahantra Ramatoa Hoogeweij dia nilaza tamiko tamin'ny fotoana nanaovan'ny mpisolovava iray ny iray amin'ireo mpiara-manga aminy. Izany no antony tiany hiasa ho azy.
Tsy mahatsiaro tena ho diso aho ...
Ny tiako hampiseho aminao amin'ny fampahalalam-baovao rehetra dia ny famerenana ny fampahalalam-baovao mahazatra sy ny fampitam-baovao hafa. Izay tsy an'ity lalao fehezin'ny lalàna ity dia tsy maintsy manohintohina sy entina. Izany no asan'i Jeroen Hoogeweij (Naomi ankehitriny). Noho ny fanohanan'ny mpanaraka vazivazy vitsivitsy dia afaka niaina aho ary mbola velona ihany. Izany fanohanana izany no nahatonga ahy ho tafavoaka velona. Na dia izany aza dia ilaina ny mijery ny sehatry ny hery ary mahita izany fa ny fampahalalana avy amin'ny tranonkalan'ny haino aman-jery hafa dia manana tendro roa naorina na mifangaro amin'ny fikirakirana mafonja amin'ny tranokala (araka ny hazavaina ao amin'ny horonantsary eto ambany eto lahatsoratra teo aloha). Izany dia zava-baovao mahatsiravina, satria midika izany fa tsy afaka mipetraka intsony miaraka amin'ny kafe na labiera iray ianao mba handravana ny vaovao ary hanaiky izany amin'ny fahamarinana.
Indrisy anefa fa ity vondrona ity dia manana fofom-pivelom-panafody milentika eo amin'ny felam-boninkazo eo amin'ny kianja filalaovana izay mamoaka ireo zavatra rehetra ireo. Tsy manao izany aho satria tiako be izany, nefa tsy manao safidy aho. Ny anarako dia notaritina tamin'ny fotaka ka tsy misy afa-tsy roa safidy sisa: midina aorian'ny fanafihana rehetra amin'ny oloko na hiady amin'ny lohako mihintsy ary mampiseho ny lainga. Nifidy an'io farany io aho.
Ny mpandroba sy ny fanalam-baraka an'i Martin Vrijland Jeroen Hoogeweij dia nantsoina hoe Naomi Hoogeweij ankehitriny
Martin Vrijland dia manakana ny FIFANDRAISANA MALAGASY
Robert Jensen sy ny bokin'ny mainty NOS news 'Arnold Karskens' manohitra ny fanoherana dia maneho: tsy ao anaty zaridaina
Tags: advocaat, Café Weltschmertz, CNP, Filankevitry ny politikam-pirenena, Hammerstein, avo Weij, Jack Abramoff, Yalta, Jeroen, Kat, Mika, Naomy, mpanohitra, Oscar, Robert Rubenstein, Swapichou
5 May 2019 amin'ny 12: 07
5 May 2019 amin'ny 12: 37
Oh eny ... Hans Moll koa dia manoratra ho an'ny jalta.nl 😉
ireo namana rehetra
5 May 2019 amin'ny 13: 05
Oscar Hammerstein dia afaka manoratra izany ao amin'ny lahatsarin'ny Café Weltschertz ho an'ny Fortuyn ary mandrehitra ny tilikambo noho ny fanafihana, saingy ilaina ny mametraka ity tantara manontolo ity momba ny Fortuyn ary ankehitriny ny FvD amin'ny sehatry ny hery mifehy. Ny hetsika ara-politika toy izany dia natsangana ho fanoherana sy harato fandriam-pahalemana ary ampahany amin'izany ny demaokrasia fantatra (sy manara-maso).
Mandritra izany i Hammerstein dia miaro ny lehilahy / vehivavy izay toa nanao azy io ho marika famantarana ny olona henjana. Ahoana no hanazavan'i Hammerstein izany?
5 May 2019 amin'ny 13: 07
Azoko sary an-tsaina fa manao zavatra tahaka izany ianao raha mihaino Oscar (raha marina izany).
ary angamba mifandray amin'ny firaisan-kina eo amin'ny olona jiosy; Tsy azoko anombanana izany avy eto. Goyim aho ihany koa.
5 May 2019 amin'ny 13: 09
5 May 2019 amin'ny 13: 20
@Martin azonao tsaroako fa taorian'ny fanehoan-kevitra maromaro tao amin'ny tranokala mikasika ny loza voajanahan'i Bijlmer an'ny 1992, ny ICTS (Schiphol) dia nanomboka nandrahona ny mailaka avy amin'i David Jan des Doods ve ianao? Ireo sary izay niseho voalohany tany amin'ny fampahalalam-pirenena ary mazava ho azy ny voalohany teo amin'ny toerana dia i William Middelkoop ny tompon'ny Amsterdamgold teo aloha (tao Schiphol 😉 tsara aho indray mandeha tao amin'ny orinasa iray ary feno ny references 666 sy ny symbolism Baphomet
Nieritreritra aho fa misy ny fanampiana mahafinaritra amin'ny hetsika rehetra 😀
5 May 2019 amin'ny 13: 38
Ny horonan-tsary Café Weltschermtz dia natao niaraka tamin'ny SALTO.
Ny ivon-toeram-pampianarana SALCA momba ny fanabeazana sy fampiofanana TCA dia naparitan'ny Kaomisiona Eoropeana tao amin'ny 2018 mba hanohanana ny masoivohon'i Erasmus + mba hanatsarana ny fiaraha-miasa amin'ny sehatra iraisam-pirenena (TCA).
Ny tetikasan'ny fiaraha-miasa amin'ny Transnationale (TCAs) dia fitaovana ho an'ny National Agencies Erasmus (NAs) mba hananganana fiaraha-miasa hampitombo ny fiantraikan'ny programa erasmus + amin'ny rafitra rafitra.
Koa ny mpanohitra Café Café Weltschmertz dia voafehy avy ao amin'ny EU na farafaharatsiny miasa miaraka aminy (SALTO); Izany dia tsotra. Antsoina hoe fanoherana mifehy izany.
5 May 2019 amin'ny 13: 44
..ao ary izany no ahafahantsika mahita ity pipo ity koa manohitra an'i Steve Brown
5 May 2019 amin'ny 13: 45
Erasmus + koa dia manome vahaolana ho an'ireo fikambanana samihafa maro, toy ny oniversite, ny mpampiofana sy ny fiofanana hafa, mieritreritra lasantsy, fikarohana sy orinasa.
Ny fandaharan'asan'ny Erasmus + Eropeana dia drafitrasa ara-bola ho an'ny asa fanohanana eo amin'ny sehatry ny Fanabeazana, ny Fampiofanana, ny Tanora ary ny Fanatanjahantena.
Ny Fandaharanasa dia misy telo antsoina hoe "Hetsika Key" sy hetsika fanampiny fanampiny. Izy ireo dia zara raha misy eo amin'ny sehatra nasionaly avy amin'ny masoivohom-pirenena ary amin'ny ampahany Eoropeana amin'ny alalan'ny EACEA. Ny Kaomisiona Eoropeana dia tompon'andraikitra amin'ny politikan'i Erasmus + ary manara-maso ny fampiharana ny programa.
5 May 2019 amin'ny 13: 52
"Eny, fa De Vlieger, ianao miaraka amin'ny volanao, maninona no tsy mandatsaka vola" (jereo ny intro)
Eny e, satria mila milaza isika fa mpirotsaka an-tsitrapo izay manana zavatra toy ny tsy fivadihana haha.
Eto amin'ny tavoahangy EU fotsiny no misy an'i Eric: tsy mampihatra io flying integrity io
5 May 2019 amin'ny 15: 18
@zalm, azonao ny dikany. Tena haingana be izany, ho an'ireo afaka mahita azy mazava
5 May 2019 amin'ny 13: 56
I William Middelkoop sy ny fomba famitahana azy dia anisan'ny famitahana, satria ny teny hoe Israely / Zionisma dia tsy tokony holazaina ho fitaovana manan-danja amin'ity seho maneran-tany ity. Hatramin'ny nanombohan'ny taona, 90 dia nanodikodina (ho an'ny tenako) ny fotodrafitrasa manerantany, indrindra taorian'ny loza tao Bijlmer tao Amsterdam tamin'ny volana oktobra '92 sy izaho dia nihaona tsy tapaka ireo mpilalao sarimihetsika mitovy momba ny lamina 😀
5 May 2019 amin'ny 13: 59
Izany no fihenan'ny fihenanam-po sy fihomehezana
5 May 2019 amin'ny 14: 10
Eny ary, mazava tsara indray fa mifampizara sy mifankahalala izy ireo.
Voalaza fa nafahana i Madurodam. Avy eo dia miteny aho avy amin'iza moa no nafahantsika? Mbola sahirana amin'ny hevitro aho. Ary miorina mafy sy feno hafaliana izy ireo ao amin'ny lohahevitra fototra Rehefa handeha tokoa ve izy ireo? Izany no lazainy.
5 May 2019 amin'ny 17: 35
Raha toa ka tsy malemy isika amin'izao fotoana izao, dia mazava kokoa hoe inona no mampivadika azy. Ny labiera sy bratwurst bebe kokoa dia ny manasa ny endriny mangidy.
5 May 2019 amin'ny 16: 28
Ary Niburu.co izay indraindray tsy manohana an'i micha Kat, fa nandefa lahatsoratra tamin'ny tanany tamin'ny herintaona, dia tsy afaka ny hiaraka amin'ny tantaran'i Evert-Jan Poorterman intsony. Evert-Jan dia mihiaka fa miresaka momba ny horonantsary Histroy Chanel, saingy mbola tsy nahita fa io fampiharan-tantara io dia mampiasa ny History Channel sy ny fanadihadiana azy ireo momba ny olona toa an'i Zecharia Sitchin sy Erich von Däniken mba hanazava izay shit ry zareo.
Raha mbola sahiran-tsaina aho, Niburu.co dia ampahany amin'ny lalao mpanara-maso maro ny fanoherana sy ny fampifangaroana ny fahamarinana amin'ny tsy misy dikany.
5 May 2019 amin'ny 16: 30
Ary Alexandra Hetebreij dia somary kamo hanamarina ny votoatin'ny Ever-Jan Poorterman ary mbola tsy nahita fa ny rakitra dia tsy avy amin'ny History Channel, fa ny teny avy amin'ny History Channel ihany. Angamba i Evert-Jan no nijery sy nijery nandritra ny minitra vitsy tao amin'ny fanadihadiana. Io antontan-taratasy io dia tena mahery ary manazava ny famokarana mazava (antsoina hoe lainga) amin'ny antsipiriany.
5 May 2019 amin'ny 16: 35
Manaparitaka ny fampahalalana azony avy amin'ity tranonkala ity ary avy eo mametraka ho valin'ny tranokalany. Fantatra amin'ny tetikady malaza psyop / tetezamita, mba hivezivezena indray ireo ondry ary afaka manohy ny fanosotra, indrindra fa ny orjana.
Naomy nanoratra hoe:
7 May 2019 amin'ny 05: 45
Eny ary, hitanao indray, karazana hatsaram-panahy. Luca van Buren, izay nanosika an'i Martijn avokoa ireo lainga rehetra naterak'izany sy ireo sazy henjana tamiko, dia mpisotro toaka be dia be tokoa, izay mihazona tsy tapaka ny fisehony rehefa manana sipy izy. Niezaka nanampy azy nandritra ny fotoana kelikely aho, fa ny hany fanampiana ilainy dia ny tranom-panjakana mivoatra sy ny fitsaboana haldol amin'ny borikiny. Indraindray aho dia manalavitra ny tenany ary tsy afaka mandany izany izy. Handefa taratasy marary ara-tsaina ho an'i Martijn izy (toy ny fikarakarako). Tao amin'ny Humanitas dia nanimba azy io ho an'ny tenany manokana noho ny fihetsika mahatsikaiky nataony, tsy misy ifandraisany amin'izany
Ary uh .. Luca transsexual? Tsia, dude. Mazava ho azy fa tsy mahagaga ny tenany i Martijn, raha tsy izany dia nisy feo mitaraindraina naneno azy raha nilaza taminy izy fa nahazo "fitiliana ADN" ho an'ny làlam-pandehanany. Tena zava-doza, satria tsy misy fikarohana DNA na oviana na oviana atao amin'ny dingan'ny transgender. Ny fahamarinana sarotra dia ny hoe tsy nahavita ny fifindra-monina tamin'ny vondrona VUmc izy, satria hitany ihany koa fa sosotra loatra izy ka mety hiatrika izany. Nihodina koa izy ary lasa tia herisetra ary avy eo dia nifarana tamin'ny tetezamita ny fiafarany. Amin'izao fotoana izao dia manondraka zavatra tsy mety amin'ny ADN izy. Na dia tsy hoe transsexual aza i Luca, fa mibaribary. Lehilahy iray mitafy akanjo fa tsy manao fanafody momba ny fifindrany.
Ny sangisangy dia nanafika olona vitsivitsy tao an-tranony izy, izay midika fa, iray (Miranda Beck-Bijl) dia efa nokaravasainy mihitsy aza ny tavoahanginy tavoahangy nataon'i Luca van Buren, izay nosamborina talohan'izay . Izany no tadiavin'ny lehiben'ny Miranda Beck-Bijl (mora atrehina ao amin'ny Facebook) tahaka ny nahitan'i Luca ny lohany tamin'ny tavoahangy iray tapaka: https://imgshare.io/images/2019/05/06/29570730_2032593783654534_2819921000651502340_n-1.jpg
Efa nanandrana nanipy teo am-baravarana aloha izy, olona iray izay levona noho ny fankahalana ary tsy afaka miatrika ny fihetsiny.
Ny sasany toa an'i Martin Vrijland, mazava ho azy, izay nitomany nandritra ny taona maro ho "niharam-pahavoazana" ahy. Raha mbola tsy nahita ny zanany vavy tsy ahy izy, dia mety ho very asa tsy misy ahy izy ity noho ny fikomiana feno fitenenan-dratsy rehetra momba azy ity ary ny zava-misy dia zavatra iray ihany no nampijaliny vehivavy maromaro tao anatin'ny fifandraisana. Tahaka an'i Luca, tsy afaka mandray andraikitra amin'ny zavatra ataony izy ary mikatsaka ny zava-drehetra ivelan'ny tenany. Tena mampalahelo.
Noho izany, uh, ry Martijn malahelo, nanao fahadisoana goavana ianao, Luca van Buren dia marary saina ara-pahasalamana sy mpitsabo, ny tantarany dia mifototra amin'ny hoe (na dia mampihomehy) aza. Amin'ny maha-sangisangy azy, anontanio ny tranom-pampianarana momba ny korontana noforoniny tany izany, izany no mpampiasa azy talohan'ny nandehanany adala.
7 May 2019 amin'ny 10: 21
Mety mahaliana raha nentina teo anatrehan'ny fitsarana ilay izy. Avy eo aho dia afaka manontany ny fanontaniana hoe nahoana no tratra ity raharaha ity fa tsy ny tatitra ataoko manohitra ny fanalam-baraka sy ny fanalam-baraka ny adiresinao.
Manomboka milaza ny anarana feno an'i Luca ianao izao, izay tsy dia misy zavatra tsara.
Mazava tsara fa nijeranao ity olona ity ho namana manokana aloha ianao ary amin'izao fotoana izao (ankehitriny izay mamaritra anao) dia maneho anao ho toy ny adala adala. Mety ho izany no izy. Nilaza ihany koa aho fa tsy fantatro raha afaka matoky ny tantara aho, saingy mahagaga fa nahazo izany aho.
Fantatray amin'izao fotoana izao avy amin'ny porofoo fa azonao atao ny mametraka zavatra toy ny tsy misy. Tsaroako ny tatitra nataon'ny polisy mikasika ny Pole maty tamin'ny raharaha Anass. Azonao atao ny manambatra ny tatitra ataon'ny polisy miafina ka miala amin'izany. Mety hilaza zavatra momba ny fifandraisanao ve ianao?
Tsy hahagaga ahy mihitsy raha nampiasa an'io Luca io ianao. Izany no fomba fiasan'ny klioba misy anao.
Nahita ny zanako vavy aho talohan'ny nanombohan'ny bokinao. Fitsarana ara-dalàna fotsiny izany. Mihazakazaka sy mandainga ianao.
Ny fiovanao dia niova kely noho ny fiovan'ny lehilahy. Hoy aho hoe: eritrereto ny fon'ny olona!
7 May 2019 amin'ny 11: 30
Taona maro lasa izay, nanamafisako ny teboka maromaro sy ny antontan'isa marobe momba ny swapichou ny antony mahatonga ny fanambaranao tsy azo ekena. Tsy niraharaha izany ianao, satria mifanaraka kokoa amin'ny lalanao izy io mba hilazana ilay niharam-boina. Tsy manan-kolazaina amiko ianao. Etsy an-danin'izany dia manohitra anao aho, anisan'izany ilay tsanganana etsy ambony. Fa raha te-hahafantatra ny fanehoan-kevitra ankapobeny momba ny fanambaranao diso aho fa tsy misy olona matoky tena satria tsy manana legioma mijoro, dia vakio ity: https://swapichou.wordpress.com/2014/04/05/de-valse-aangifte-van-martin-vrijland/
Tsy namako manokana i Luca. Tena nanohina ahy ny fisotroan-dratsiny, ny fankahalana sy ny herisetra izay tonga teo aminy ary tsy tiako ny hanana olona toy izany ao amin'ny tontolo iainako manokana ary nampitombo ahy hatrany lavitra any izy. Tsy mifanerasera amin'ireo olona izay tsy misy antony, miasa miaraka amina tavoahangy eo anoloan'ny tarehiny, mitrakà ny varavarana amin'ny vahoaka, mihazakazaka ny fanentanana fankahalàna ao amin'ny aterineto, na mifandray amin'ny tarehimarika tahaka anao mba hamahana azy ireo amin'ny fankahalana sy ny lainga. Luca dia atahorana ho an'ny tenany sy ny hafa ary tsy izaho irery no mahita azy.
Inona no tianao momba ny tatitra ataon'ny polisy? Manome tsiny ahy ianao noho izany ary nihevitra aho fa sangisangy tsara izay nentina niaraka taminao. Saingy tsy nisy zavatra hafa noraisiko tamin'ny sangisangy izay azonao. Nitsikera anao aho, momba ny fanararaotanao tanteraka ny renin'i Anass. Izany no nahatonga anao maloto sy ambany. Ny fomba nifanaovanao tamin'ny tatitra nataon'ny polisim-pirenena dia naneho tamin'ny fomba maotina fa adaladala ianao noho ny kopia tsy misy fampahafantarana izay mifanaraka amin'ny lalanao, raha ny marina toy izao ataonao izao miaraka amin'ny lainga manaitra ahy momba an'i Luca. Tsy misy famerenana, tsy misy famotorana, dia adala loatra, sahiran-tsaina ary ratsy ianao mba hahitanao zavatra.
Nampiasa an'i Luca ve aho hametraka fandrika iray? Tena mampihomehy tokoa. Manome voninahitra an'i Martijn ianareo, mangataka amin'ny fikarakarako ny sombin-javatra tahaka izao, fa ianao kosa dia very tsy misy fahalianana izay tsy ananako hery hamelezana karazana "lavo". Amin'izao andro izao aho dia miasa amin'ny zavatra tena samihafa. Ny tarehimarika tahaka anao no nanentana ny fanahiko hiasa amin'ny toekarena aho ary ankehitriny dia mitazona ahy ho sahirana amin'ny zokiolona sy ny fitsaboana ara-tsaina. Heveriko fa misy olona toa anao ihany no mahaliana raha marary na marary. Tsy manahy mikasika ny fahavoazana ara-tsosialy izay mahatonga anao hitarika ny rariny any an-trano aho.
Ho an'ny rakitsoratra: Tsy mba nifandray tamin'ny renin'ny zanakao mihitsy aho, nisy olona maro niasa taminao. Avy eo dia tsy maintsy mijery anao manokana ny sasany aminao. Tena tsy miraharaha ny fifandraisanao amin'ny zanakao aho. Saingy nanao hadisoana ianao: ianao dia hametraka ny sarin'ny zanako ao amin'ny blôginao ary amin'ny fanehoan-kevitra ny zanako dia atahorana amin'ny fanehoan-kevitra. Mazava ho azy fa miantso azy io amin'ny tenanao ianao. Ho ahy manokana dia afaka manao zavatra betsaka aho, fa raha tonga any amin'ny zanako ianao dia manana olana. Niaina izany tsara ianao, nandoa an'io volavolan-dalàna io.
7 May 2019 amin'ny 11: 56
Ny sasantsasany ao amin'ny Swapichou dia ny fanovana ny zava-misy jeroen amin'ny lafiny rehetra.
Tsy hanaisotra ny olana intsony aho mba hamahana azy amin'ny antsipiriany. Izany no hodinihina amin'ny tranga ara-dalàna.
Ny fanambarana tena marina izay nataoko dia lasa amin'ny an-tsipiriany bebe kokoa, fa ianao ihany no manao izay mifanaraka amin'ny lalanao ary manodina zavatra maromaro izay nampiasako anao.
Nanatona an'i Andrea ianao mba hamotsotra ny lozabe amiko, amin'ny fanatrehana andian-tafika hafa sy miezaka handresy lahatra azy ireo hanao fanambarana diso amiko (fa hampijaly azy ireo aho), dia efa voasoratro.
Tsy fantatro raha nahita ity horonantsary ity ianao? Raha tsy izany, te-hametraka azy eto aho.
Milaza ianao fa "tsy miraharaha ny fifandraisanao amin'ny zanakao aho," hoy ny fitenenanao momba ny fitiavan-tena. Fantatrao tsara ny fahasimbana nataonao tamin'ny tranokalanao izay nanapahanao ny zava-drehetra; mamoaka ny angon-drakitra avoakan'ny lahatsoratra sy ny sisa. Etsy ankilany, tsy nahazo ny zanakao na oviana na oviana aho ary tsy namoaka na inona na inona momba ny fifandraisana amin'ny zanakao. Azonao atao ny mametraka azy io, saingy ampiasainao izao ny fanehoan-kevitra ao amin'ny fanehoan-kevitra nataoko, ny fanehoan-kevitra izay nesoriko, vokatr'ilay fihantsiana manohitra ahy. Tsy marina izany, satria efa nanomboka ilay ditze efa ela talohan'izay.
Ny tatitra iray dia tsy azo ekena raha toa ka milaza ny tenako manokana ny manampahefana amin'ny fitsarana ary tsy raha toa i Jeroen Hoogeweij no mitatitra izany amin'ny tranonkala feno fanovana sy lainga. Na dia izany aza, tsy nahazo valiny avy amin'ny polisy mihitsy aho fa tsy mbola tao anaty fantsona.
7 May 2019 amin'ny 12: 15
Oay sy ny fialan-tsiny nataoko no niantsoako anao hatrany Jeroen. Tena manahiran-tsaina tanteraka ny hamelezana an'i Jeroen indray mandeha ary vitsy taona taty aoriana dia vehivavy tampoka ianao.
Ahoana no ahafahanao mamela anao hiditra amin'ny dingam-panovàna ary avy eo mankasitraka ny fampiofanana ara-psikolojia raha toa ianao ka somary mirona amin'ny aterineto? Voamarikao ve izany alohan'ny handehananao ny fizotry ny fifantenana? Sa ny fitondran-tena ara-psikolojika?
7 May 2019 amin'ny 12: 21
Nalaiko ilay fanambarana rehefa niresaka taminao aho. Mazava ho azy fa tsy mamaly ny fiarovako aho, satria tsy manana tongotra matanjaka ianao. Raha nampifandraisinao amin'ny polisy ny zavatra hafa napetrakao tao amin'ny aterineto, izay indrindra no milaza zavatra momba anao. Nanao ny fanambarana diso aho izay navoakanao tamin'ny antsipiriany feno, marina ary tamin'ny feon'ny fieritreretana madio, ary teo ambanin'ny rohy nomeko anao dia afaka mamaky tanteraka ny zavatra mandry anao ianao, maminavina, mandanjalanja ary miampanga anao. Toa tsy nihevitra ny polisy fa hafa mihitsy ny polisy, raha tsy izany dia ho voahenjika aho. Tsy misy tranga fotsiny ianao.
Nodinihinay tamina ekipa olona nanimba anao nandritra ny taona maro tokoa izahay. Tsy "hamoaka", fa hampitsahatra ny zava-misy momba anao, ny rakitsoratry ny heloka bevava, ny bankirompitrao ary ny fanararaotanao ny vehivavy. Mpanao heloka bevava ianao, mpilalao ratsy, navela hizotra ho any aoriana ianao, ka voatery nitsahatra tany. Nahomby izahay tamin'ny ampahany tamin'izany ary manantena izahay fa hianatra ny lesonao amin'ny fotoana iray.
Tonga teo amin'ny zanako tokoa ianao, nasianao sarinà izaho sy izy tamin'ny lahatsoratra iray. Teo ambanin'io lahatsoratra io dia norahonana ihany koa ny zanako lahy. Ireo olona liana dia afaka mahita screenshots izany ao amin'ny lahatsoratra nakariko. noho izany dia mandainga ianao. Indray, izaho dia "kilalao tsara", tsy afaka manohina ahy mihitsy ianao. Saingy manalavitra ny zanako lahy ianao ary efa niaina izany. Satria noho izany dia manana olana ianao ary rehefa tonga amin'ny marika dia tsy mifanaraka amiko ianao.
Firy taona lasa izay no nanaovanao io fanambarana io indray? Matetika ianao no nanondro ny tranokalanao fa tsy te hanenjika ny polisy ny mpisolovava nanoloanao fa tsy nanao na inona na inona tamin'io, mba hahalalako fa tsy azo atao ny tatitra ataonao? Tsy mifototra amin'ny lahatsoratrao aho, fa miorina amin'ny teninao manokana.
7 May 2019 amin'ny 12: 36
Mitazona an'i Jérôme mandainga sy mihazakazaka.
Raha toa ka ho anao sy ny ekipanao izany, ohatra, dia tany am-ponja aho. Ny tsy misy dikany. Mbola tsy andro iray!
Noraisiko an-tsoratra fa nanatona ny olona i Andrea mba hanao fanambarana diso momba ahy. Fantatro fa tsy mamaly izany ianao, fa manandrama hanaraka ny anjara andraikitry ny niharam-boina satria nanafika ny zanakao aho. Aiza ny sarinao sy ny zanakao? Tsy eo ambanin'ny fehikibo aho ary mbola tsy mila izany.
Ooh eny sy izaho dia nanao hosoka amin'ny carte de crédit ... mandrapahafantarako ny porofo fa tsy misy dikany izany. Avy eo dia nofafàna indray ity tantara ity mba hamonjena ny fahatokisanao kely.
Nody toy ny alika ianao taloha alohan'ny ahafahanao milaza fa efa namoaka zavatra momba ny zanakao aho (izay tsy nataoko mihitsy, fa ny fanamarihana nataoko nopotehiko). Toa tsy namoy io toetra io ianao. Miantehitra hatrany amin'ny tranonkalanao Swapichou ianao, saingy tsy loharanom-baovao azo antoka izany, satria ianao dia manao toy izany amin'ny ataonao: Mametraka zavatra tsy mety ary mitondra azy ho toy ny zava-misy, raha tsy misy zava-misy.
Tsy fantatro raha te-hamaly bebe kokoa eto ianao, fa raha mbola sahiran-tsaina aho, dia afaka manao izany any amin'ny fitsarana ihany koa. Manahy aho hoe iza no mpisolovava anao. Tsy hitako ny maha-zava-dehibe an'io fifanakalozan-dresaka tsara io, ankoatra izay ampisehonao fa mbola manasitrana sy mitabataba ary mitabataba manodidina anao ianao. Ianao dia ambonin'ny lalàna, sa tsy izany?
7 May 2019 amin'ny 12: 35
Raha tonga ny fotoana tsy mety tsy hay hadinoana anao mba hohazaina amin'ny fanomezan-dàlana ara-pitsarana ianao ary mifarana miaraka amiko ianao amin'ny maha-mpikarakara anao ao amin'ny orinasa, dia ho hitanao fa mpitaiza be fitiavana izay natoky ny marary. Tsy mahafantatra ahy mihitsy ianao.
Ary raha mahazo aina miaraka aminay ianao, mba tsy ahafahanao mihetraketraka loza ho an'ny tenanao na ny hafa, dia mazava ho azy fa hanana karazana hafa tanteraka aho. Tsy voatery hiaro ny zanako aho na hisakana anao tsy hanao fahavoazana. Mazava ho azy fa tsy misy zavatra tsy mety. Raha toa ianao ka mandray ny fanafody ara-potoana.
7 May 2019 amin'ny 12: 42
Eny tokoa. Fotoana fohy indray izany! Alao ny pilina sy ny tsimokaretina avy ao Naomi!
Toa zava-nisongadina izany!
7 May 2019 amin'ny 12: 51
Amin'ny lafiny, vaovao mahafinaritra Orwellian avy amin'ny "fikarakaranao" anao. Mazava ho azy fa tsy hangataka mihitsy ny 'fikarakaranao' (na ny hafa) mihitsy aho raha omena baiko ny fitsarana. Ny zavatra izay napetraka dia tsy azo raisina ho toy ny fanontanianao manokana, saingy oh tsara, ny marary saina psychiatric, mazava ho azy, dia tsy afaka nifehy izany tamin'izany fotoana izany.
Dia ho hitako indray ao amin'ny gulag ianao. Tahaka ny fotoana mahafinaritra ho anao!
Ny vahiny, izay nolazainao tamin'ny lasa fa nijanona ianao. Na izany dia tsy fantatro na izany no tranon'ny mpitandro filaminana, fonja mitam-piadiana na fonja iray, fa ianao kosa dia gadra efa nigadra dia zavatra nolazainao tamin'ny fofona sy loko.
7 May 2019 amin'ny 13: 02
Afaka manintona anao ve aho amin'ny lainga? Loharano azafady.
Atsaharo ny lehilahy mandainga. Tsara kokoa.
7 May 2019 amin'ny 12: 55
Miombon-kevitra aminao aho fa ny mpikarakara ny orinasan-tserasera Orwellian; sorry, famoretana matihanina. Amin'ny fampiofanana ahy dia mampiasa io fehezan-teny io izy ireo, saingy izao dia satria izaho any am-pianarana miaraka amin'ireo mpianatra avy amin'ny karazana fikarakarana sy fitsaboana rehetra ary mampiasa fomba fanao amin'ny ankapobeny. Any am-piasana, miantso olona hoatran'ny "marary" izahay.
7 May 2019 amin'ny 13: 05
Misaotra anao noho ny fanazavanao. Manomboka mahita aho fa tokony ho mpitsabo mpanampy be fitiavana ianao.
Ny famoizam-pitenenana dia voavela heloka.
Ny rahavavy Naomy dia hitondra anao amin'ny fitiavana 🙂 Tsy mijery ny olona ao anatiny, amin'ny fahadisoany mihitsy, satria hitako fa anisan'ny aretina.
Tsikaritro fa tsy mety ny manadino ny zava-manahirana anao, tsy mitady fanampiana ary manohy manery ny fiarahamonina amin'ny fitondrantenanao. Na izany na tsy izany, dia azo tsapain-tanana kosa ilay singa malaza amin'ny maha-olona anao.
7 May 2019 amin'ny 12: 58
Tsy manelingelina na iza na iza aho; na ny fiaraha-monina.
Manoratra fotsiny ny hevitro aho. Nantsoina hoe 'fahalalahana maneho hevitra' izany. Azonao atao ny manaiky na manaiky izany ary avy eo dia ambarao izany fotsiny.
Ny zavatra ataonao dia (miezaka mazava tsara eto) manandrana mamono olona iray satria tsy manaiky an'io hevitra io ianao.
Ireo no fanandramana hanafoanana ny hevitra amin'ny alàlan'ny asa tsy voamarina.
Mieritreritra aho hanaiky fa afaka manao fahadisoana sy manao fahadisoana aho. Izaho no olona farany milaza fa manana ny fahamarinana tsy azo lavina aho. Ny fanentanana ny eritreritrao amin'ny fanolorana hevitra anao amin'ny blaogy dia zavatra iray hafa fa tsy miteny hoe "ity no fahamarinana tsy azo lavina ary tsy maintsy mino an'izany ianao".
Hatramin'ny oviana no nahatonga anao ho heloka bevava. Eny, takatro fa ity angamba no tranga tsy ho ela, saingy mihevitra aho fa nanao dingana iray bebe kokoa noho ny nanoratanao ny hevitrao ianao ary hanao fanafihana manokana. Azoko tsara fa manana ny fijerinao manokana ianao mba hanafaka anao amin'ity heloka bevava ity.
Fa ny Rahavavy Naomi dia mety ho tena be fitiavana amin'ny marary. Matoky izany aho. Toe-javatra mahafinaritra tokony ho anao izany. Na ahoana na ahoana, tsy afaka manohitra anao izy ireo, satria misy foana ny efitrano tsy misy varavarankely sy pilina fanampiny.
7 May 2019 amin'ny 13: 12
@ Naomi / Jeroen na hafa
Alefaso eny ambony ambony ny fiteninao, mitaraina hoe:
"Nitsikera anao aho, momba ny fanararaotanao tanteraka ny renin'i Anass. Izany no nahatonga anao maloto sy ambany. Ny fomba nandraisanao an'io tatitra avy amin'ny polisy tsy misy dikany io dia maneho amin'ny fomba maika fa ny adala dia ao amin'ny kopia tsy misy famoahana ny vaovao. "
Ny tatitra avy amin'ny mpitandro filaminana dia nampandrenesin'i Martin tamin'ny antsipiriany ary nahita fa nomen'i Zohra Aouragh reniny an'i Martin.
Te hanampy ny reniny izy ary azo alaina avy ao amin'ny tranokala MartinVrijland tamin'izany fotoana izany.
Indraindray izy dia tsy maintsy matoky ny reny avy amin'ny tatitra ataon'ny polisy hafahafa, mazava ho azy fa tsy nino ny reniny.
Saingy tsy ela dia hita fa tsy azo natao ny tatitra satria ahoana no mety tsy hitan'ny mpitandro filaminana miaraka amin'ny mpijery mena midorehitra, alika, soavaly ary helikoptera ny vatany (mihantona amin'ny takelaka) mandritra ny alina, raha manao sivy ny jogger Amin'ny maraina dia tsy mety ny tatitra. Raha mahazo tatitra toy izany ny renim-pianakaviana iray, dia tsy maintsy miala ny lakolosy fanairana ny reny, saingy tsy misy izany.
Mazava ho azy fa hafahafa loatra fa nijanona teo am-pandriana ilay reny tamin'io hariva io raha nandeha tany amin'ny polisy izy ary nilaza fa tsy hita. Amin'ny maha renim-pianakaviana anao dia mikiakiaka amin'ny zanakao ianao.
Ary toy ny reny tsy miteny ianao rehefa mahita ny sarin'ny zanakao, "mahita ianao: vonona izy"
Izay rehetra aseho sy bebe kokoa ................ >>>>>
Na i Hoekema, ben'ny tanàna aza, niteny tao amin'ny fandaharana iray tao amin'ny fahitalavitra, "Eny, zava-miafina ilay zazalahy no hita sivy tamin'ny maraina raha nitady an'io toerana io ihany izy nandritra ny alina. Tena hafahafa tokoa.
Inona koa no mistery rehefa nanontaniana fa tsy naneho ny alahelony ny anabavin'i Annas, nihomehezany tao ambadiky ny fiara fitaterana (jereo ny tahirin-tsary) ary ny ankizy tao an-tanàn-dehibe ihany koa dia nahatsikaritra fa tsy nisy tena ory. )
Mahagaga ihany koa fa tsy nifikitra tamin'ny fananganana ny rariny tamin'ny reny ny renim-pianakaviana noho ny fanazavana, ary hafahafa ihany koa fa nanana mpisolovava telo samihafa izy tao anatin'ny herinandro vitsivitsy.
Mahagaga ihany koa fa niteny tamina mpamily fiarakaretsaka iray tany an-tanàn-dehibe i Annas fa mety hanjavona izy (na ny mpamily fiarakaretsaka no mpikarakara, izay mahafantatra)
Mahagaga ihany koa fa nisy fampisehoana iray natao tao Den Haag, mpilalao sarimihetsika izay ahitana ny rainy koa ary mbola tsy nino ny famonoan-tena izy, nahoana no tsy tao amin'ny demo ny mnoeder
Moa ve ny ray aman-dreny tonga any amin'ny fetran'ny fanazavana, tsia? Raha tsy izany dia mety ho nahavoa ny Telegraaf sy ny tranonkala / governemanta toy ny: "Crimesite, De Bovenkamer Maud Ooortwijn, Boublog ?? Niburu.co, etcetera
Mety ho maivana noho ny ahiahy ny raharaha Annas
Archives of MartinVrijland at that time
Nandeha ny fampisehoana, aiza ny reniny?
7 May 2019 amin'ny 05: 47
Misaotra ny fialam-boly Martijn. Tohizo izany!
Hitako fa tena mampihomehy ny faniriana luciferiana.
7 May 2019 amin'ny 06: 16
Na izany na tsy izany, tsy sahy manaparitaka ireo valinteny ireo ianao. Tsy maintsy ataonao eo am-bavanao ny làlan-tsainao hikolokolo anao, fa ny marina dia mazava ho azy fa tsy misy fahamarinana, rariny ary tsy misy fahamendrehana ao aminao. Ny zavatra tokana azonao atao dia manely fanendrikendrehana sy mitady ny tsiny amin'ny zavatra rehetra mitranga aminao ivelan'ny tenanao. Tsy manana tsipika mahitsy ianao, fa ny sarin'ny olona tsy misy vidiny.
7 May 2019 amin'ny 07: 06
Mazava ho azy fa "tsy voahosotra" izy io fa tsy "tsy voahosotra", mongol. Ny maha-olona tsy mahay anao no tena asehonao.
7 May 2019 amin'ny 10: 42
na ny fanehoana an-dàlambe miaraka amin'ny d ou t, dia azonao.
Mascara dia miaraka amin'ny k oder c, dia ho fantatrareo amin'izao fotoana izao 😉
Mandrosoa, dude, mialà sasatra kely, tsy mitaraina izahay fa ny andriamanitra dia nanao fahadisoana taminao, afaka nanatsara izany tsara indray ianao, tsy ianao, izany ve, sa tsy izany?
Mampiseho ny maha-izy anao ianao amin'ny alalan'ny fianianana kely amin'ny habakabaka.
Ny Mongoliana na ny olona sendra olona dia tsara tarehy, angamba tokony hiova fo amin'izany koa ianao
7 May 2019 amin'ny 08: 50
Ary mazava ho azy, ianareo dia alika kanosa, toy ny vehivavy hafa mpanafika, izay manahy, ambany sy ambany mba hananatra na handefa valiny. Manantena aho fa fantatrareo fa ity fihetsika ity dia mahatonga anao ho saziana.
Tianao ve ny hamerina anao indray? Toa mangataka izany ianao. Aza manahy, fa efa tena tadiaviko ianao sy ny toerana misy anao, ao anaty fitoeram-bala ao amin'ny fiarahamonina. Tsy mila manao na inona na inona intsony aho.
7 May 2019 amin'ny 13: 50
Ary noho izany dia hitanao indray fa mipetraka eto amin'ity tranokala ity izahay, tsy maintsy niandry ny gidro hivoaka izahay. Ireo tarehimarika tahaka ny hoe hoogeweij dia mandeha tsara amin'ny fampandrosoana an'i Holandy ho firenena tsy azo ihodivirana. Ny mpangalatra sy ny fanerena henjana dia tena manan-danja, mainty sy fotsy ny mainty, angamba rehefa vita ny fandaharam-potoany dia mety ho marika amin'ny fikambanam-behivavy mba hitazonana ny orinasa miaraka amin'ny ekipa mifandona 'misafotofoto' izay isam-bolana ho an'ireo olona mety hampidi-doza ny status quo amin'ny madurodam.
7 May 2019 amin'ny 20: 36
Ity indray dia fampianarana indray, afaka mahita an'ity olona ity ianao fa feno feno fahalotoana, fankahalana misy poizina ary mifototra amin'ny tena izy. Feno fanafihana amin'ny tsy firaharahàna, fanevatevana, lahatsoratra mandainga, sns. Azo lazaina fa tena miahiahy ity olona ity. Olona manjavozavo ho an'ny fiarahamonina, dia nivoaka avy tao amin'ny akanjony ny gidro.
"Ianao no toerana tiako ho anao sy ny toerana misy anao, ao anaty fitoeran-tsoavan'ity fiarahamonina ity."
Izany dia mampiseho fa io olona io dia mahatonga ny olona ho kelikely kokoa ary io olona io dia mihevitra fa nandondona tanteraka olona iray izy ireo. Tena ara-tsaina sy mampatahotra. Maro no mahita izay ataon'ny olona toy izany. Avy amin'ny lahatsoratra fotsiny no ahafahanao mamerina ny tsipika rehetra raha toa ianao ka manana fifanakalozan-dresaka tena manan-danja amin'ny endrika tahaka izany, manomboka maharikoriko any amin'ny toerana iray ianao. Ity no iray amin'ny ohatra amin'ny fomba toy izany
ary misy maro amin'izy ireo amin'ny madurodam sy ny any ivelany.
Ary afaka manohy ianao, saingy valin'izany fohy izany.
« Fanamarihana fa tranokalan'ny fampahalalam-baovao lehibe ny fanoherana
Julie van Espen, Anne Faber, Belzika ary mpamono an'i Steve B. Belleman Michael P. ao amin'ny PsyOp farany? »
Total visits: 14.455.595
Martin Vrijland op Any amin'ny sehatry ny polisy, maniry ny fandraràn'ny polisy sy ny mpamatsy "fanampiana" ianao